Lataliyihii Amniga xafiiska Ra'iisul Wasaaraha oo is casilay | Keydmedia
Lataliyihii Amniga xafiiska Ra’iisul Wasaaraha oo is casilay
Libaan ayaa is casilaaddiisa ku cadeeyay qoraal kooban uu soo dhigay bartiisa Twitter, haseyeeshee Liibaan ma sheegin sababta rasmiga ah ee ka dambeyso iscasiladdiisa.
MUQDISHO, Soomaaliya - Lataliyihii Amniga Qaranka ee xafiiska Raiisul Wasaaraha Soomaaliya, ahaana madaxii dib-u-habeynta ciidamada Liibaan Cabdi Xasan ayaa iska casilay shaqadii uu xafiiska Raiisul Wasaaraha u hayay.
Libaan ayaa is casilaaddiisa ku cadeeyay qoraal kooban uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka, haseyeeshee Liibaan ma sheegin sababta rasmiga ah ee ka dambeyso iscasiladdiisa, waxaana xusid mudan in Liibaan uu wax ka yar saddex bilood ka howl geliyay xafiiska.
Macaaluumaad ay heshay Keydmedia Online ayaa sheegaya in Liibaan uu cadaadis xooggan kala kulmay dhinaca lataliyaha Madaxweynaha ee Amniga Qaranka, waxaana la sheegayaa in arintaan ay ku kaliftay in uu is casilo.
Liibaan ayaa xafiiska horey ugala wareegay Samiira Gate oo iyadana saddex bilood ka hor shaqada isaga tagtay, waxa ayna tani muujineysaa culeyska siyaasadeed ee madaxtooyada saareyso saraakiishii ka howlgeli jiray xafiiska Ra'iisul wasaarihii xilka laga tuuray.
Dhawaan ayay aheyd markii sidaan oo kale uu isku casilay Agaasimihii dhinaca xiriirka Warfaafinta iyo xiriirka Bulshada Cali Nuur Salaad uu xilka hayay muddo labo sano ah, isagoona oo aan sheegin sababta ku kaliftay is casilaaddiisa.